Man City oo iska xaadirisay afar dhamaadka tartanka FA Cup kaddib markii ay ka soo gudubtay Newcastle … +SAWIRRO – Gool FM
Man City oo iska xaadirisay afar dhamaadka tartanka FA Cup kaddib markii ay ka soo gudubtay Newcastle … +SAWIRRO
(England) 28 Juun 2020. Manchester City ayaa u gudubtay afar dhamaadka tartanka FA Cup kaddib markii ay guul 0-2 ah ka soo heshay kooxda Newcastle, kulan qeyb ka ahaa wareega siddeed dhamaadka ee tartankan.
Qeybta hore ee ciyaarta ayaa lagu kala maray 0-1 ay ku hogaamineysay kooxda martida aheyd ee Manchester City.
Daqiiqadii 37-aad Manchester City ayaa heshay rigoore waxaana gool u badalay Kevin De Bruyne oo dheesha ka dhigay 0-1.
Daqiiqadii 68-aad Manchester City ayaa dhalisay goolkeeda labaad, waxaana 0-2 ka dhigay Raheem Sterling, kaddib markii uu goolkan ka caawiyay saaxiibkiis Phil Foden.
Ugu dambeyntii ciyaarta ayaa waxay ku soo dhamaatay 0-2 ah ay kaga adkaatay Manchester City kooxda Newcastle United, guushaan ayaa ka dhigay in Sky Blues ay u gudubtay wareega afar dhamaadka ee tartanka FA Cup.
Si kastaba ha noqotee, isku aadkii goordhow la sameeyay ee afar dhammaadka FA Cup-ka ayaa waxay afarta kooxood isugu beegmeen Manchester United v Chelsea, halka sidoo kale ay isku beegmeen Arsenal v Manchester City.
Shaxda rasmiga ah kulanka kooxaha Espanyol iyo Real Madrid ee horyaalka La Liga oo la shaaciyay